သင်၏အသံကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကြမ်းပြင်မှကယ်တင်ခြင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery » audio » အဆိုပါဖြတ်တောက်ခြင်းအခန်းကြမ်းပြင်ကနေသင့်ရဲ့အသံသိမ်းဆည်းနေ
အသံများသောအားဖြင့်ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုပြီးဆုံးဖို့နောက်ဆုံးအပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ့သို့သောအသံအယ်ဒီတာများ, အသံဒီဇိုင်နာများနှင့်ရောနှောကြောင့်အချိန်နှင့်ဘတ်ဂျက်မှကြွလာသောအခါရေတိုကောက်ရိုးရလေ့ရှိပါတယ်။ အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် finish ကိုသို့မဟုတ်ညှစ်ဖို့အရူး dash အစဉ်အဆက်လည်းမရှိဆိုပါက, သင်ကအသံအဖွဲ့ impact သွားရဲ့အလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်။
Matt Hines က
မေးခွန်းငါတို့သည်အဘယ်သို့အချိန်အခက်အခဲကြောင့်လိုက်လျောလျော့ကျလာစဉ်အသံပညာရှင်များတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အဘို့အချိန်ပိုမိုပေးစေခြင်းငှါအသံ post ကိုထုတ်လုပ်မှုချောမွေ့နိုငျသညျ, ဖြစ်နေဆဲ? ရှင်းနေသည်မှာအချိန်ဇယားကျုံ့ပေမယ့်, အလုပ်၏တူညီသောငွေပမာဏနေဆဲအမှုကိုပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တဦးတည်းဖြေရှင်းချက်သူတို့ကိုလက်စွဲစာအုပ်, အချိန်-စားသုံးတာဝန်များကိုနှင့် Automation အများအပြားယူပြီး, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်အရှိန်မြှင့်အတွက်တည်ရှိသည်။
ငါတို့သည်ဤလောကန်းကျင်အယ်ဒီတာများနှင့်ရောနှောအသံစကားပြောသည့်အတိုင်းတစ်ဦးအရာရှင်းရှင်းလင်းလင်းခဲ့: ADR (အလိုအလျောက်ဆွေးနွေးပွဲအစားထိုး) တစ်ဦးဝီရိယစိုက်နဲ့စျေးကြီးတာဝန်နေဆဲဖြစ်သည်။ ရိုက်ကူး / ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းဖမ်းမိသံကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်အသုံးမပြုနိုင်စေနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ADR လိုအပ်ပေသည်။ မသာပါက re-voice သူတို့ရဲ့လိုင်းများမှထိန်းချုပ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်မှာမှသရုပ်ဆောင်များကိုသယ်ယူပို့ဆောင်စျေးကြီးသည်ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုကသူတို့အပေါ်-တည်နေရာစွမ်းဆောင်မှုများ၏စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်မှုထပ်ဖွသရုပ်ဆောင်တွေအတွက်လည်းအလွန်ခက်ခဲပါတယ်။
ဤအကြောင်းများကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုသည်အသံနီးပါးအမြဲတမ်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စစ်မှန်ရှုထောင့်ကနေပိုမိုနှစ်သက်သည်။ အဆိုပါကောင်းသောသတင်းများ, ဒီနေ့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအများကြီး (နေသမျှကာလပတ်လုံးသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအမှန်တကယ်ပျံသန်းရဟတ်ယာဉ်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးသို့မဟုတ်သင်တန်းကြီးသောလေတိုက်စက်မှလာမယ့်မတ်တပ်ရပ်အဖြစ်), ခေတ်သစ်ဆူညံသံ-လျှော့ချရေးနည်းပညာများကျေးဇူးတင်လုံးဝပြန်လည်ပြုပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီး ပို. ပို. noisier ဖြစ်လာသကဲ့သို့, ထုတ်လုပ်မှုအသံလာဒေခ်တိုင်းခေတ်သစ်ထုတ်လုပ်မှုဟာမွေးရာပါပြဿနာဖြစ်နေဆဲပင်။
အထူးသဖြင့်အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူ, ADR အပြင်မြောက်မြားစွာစိန်ခေါ်မှုများရှိနေပါသည်။ on-တည်နေရာ recordists သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်ရှာတွေ့သည့်ထူးခြားသောအခြေအနေများပေးထားသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးပေမယ်ကြောင့်ထိုအရှိုး၏သဘောသဘာဝရန်, အရင်ကထက် setup ကိုများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများအတွက်အနည်းငယ်မျှသာအချိန်နှင့်အတူ "သူတို့ပျံသန်းအပေါ်" ကိုပိုမိုပစ်ခတ်မှုရှိသေး၏။ အသံက တည်နေရာများကိုပိုမိုလွန်ကဲဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မကြာခဏသင်သာတစ်ဦးလက်ခံနိုင်ဖွယ်ယူဖမ်းယူမှာတဦးတည်းကိုပစ်ခတ်ရပါတယ်။
အဆင့်စစ်ဆေးမှုများ Non-တည်ရှိသို့မဟုတ်တဟုန်တည်းပြေးခဲ့ကြစဉ်ကတည်းကရှိုးဤအမြိုးအစားကနေ audio ပုံပျက်နှင့် clipping ရန်, 50 / 60 Hz ကြောင့်မကောင်းတဲ့မြေပြင်ဆက်သွယ်မှုမှ hums နှင့်အသံမြည်မယ်ကနေပြဿနာတွေတစ်အိမ်ရှင်နိုင်ပါသည်။ အနည်းငယ်သာမှာအားလုံးအဆင့်နှင့်, အမြတ်လည်းဆူညံသံအထပ်ကိုတက်စေပါလိမ့်မယ်ဖွင့်လှည့်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ မလိုချင်တဲ့နောက်ခံဆူညံသံ၏ကျန်းမာသောအဘို့ကို Add နှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုတိုးမြှင့်။ ဤအရာအလုံးစုံအကြောင်းပြချက်များနှင့်အများအပြားပိုပြီးအဘို့, အသံပြုပြင် tools တွေနဲ့ရောနှောအသံနှင့်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်လာကြပါပြီ။
အဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုဖြေရှင်းရန်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းရိုးရှင်းစွာအရှိဆုံးကန့်ကွက်စရာအသံကိစ္စများနားထောင်ရန်နှင့်ပိုင်းခြားသိမြင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အသံကျယ်လောင်အလုံအလောက်လား? ဒါကြောင့်ပုံပျက်နေသည်? နောက်ခံဆူညံသံအာရုံပျက်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနားမလည်အောင်သလဲ?
သငျသညျထိုကိစ္စအထီးကျန်င့်ပြီးတာနဲ့က tools တွေကိုတက်ပစ်ခတ်ဖို့အချိန်ပါပဲ။ ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် iZotope ရဲ့ RX4အသုံးပြုခြင်းက Spectrogram display ကို၌သင်တို့၏အသံမှာကြည့်ရှုရန်အလွန်အသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Spectrogram သငျသညျကိုရှငျးရှငျးလငျးလငျးသငျသညျကို fix ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ပြဿနာတွေကိုတွေ့မြင်ကူညီပေးသည်။ အဝတ်အစားဆန့်ကျင်နိန် lavalier MICS ထံမှလက်ဝတ်ရတနာ / ဝတ်စုံသို့မဟုတ်ပြန်တယ်ထံမှရံဖန်ရံခါကလစ်ရှိပါတယ်လျှင်သင်ရောင်စဉ်တန်းပြုပြင်ခြင်းအသုံးချချင်ပေလိမ့်မည်။ ဆဲလ်ဖုန်း? ဥဩ? ပြဿနာမရှိပါဘူး။
ဒါကကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးပျံ့နှံ့သံကိုကြည့်၏အလွန်ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျရှေ့တျော၌တဦးတည်းကိုသုံးဖူးပါဘူးမယ်ဆိုရင်ဒါဟာရောင်စဉ်တန်း display ကိုရန်အသုံးပြုရမယ့်အခိုက်အယူ, သင်မူကား start တခါ, သင်ပြန်သွားပြီးဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဖြီး tool ကိုသုံးပြီးသင်မှန်ထဲကဖောက်ပြန်တဲ့ဆူညံသံပန်းချီနိုင်ပါတယ်။ အချို့ကဆူညံသံအခြားသူများထက်ကြည့်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူသော်လည်း, Display ရဲ့အပေါ်အပိုင်းဖြတ်ပြီးအကြိမ်အနည်းငယ်ကစားခြင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်။ low-အကြိမ်ရေအသံ Display ရဲ့အောက်ခြေအပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအမွဲသို့မဟုတ်သင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့်အတူ "တည်ငြိမ်-ပြည်နယ်" နောက်ခံဆူညံသံရှိပါက, သင်သည်သင်၏တည်းဖြတ်လျှောက်လွှာထဲမှာတိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆွေးနွေးပွဲ Denoiser ကဲ့သို့သော Real-time denoiser plug-in ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်။ အားလုံး denoiser algorithms တစ်နည်းနည်းနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဆူညံသံ "ကိုသင်ယူ" ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, RX အလိုအလျှောက်ဒီပါဘူး။ အသံဗလံကိုပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင် RX ရဲ့ "အော်တို mode ကို" ပင်သစ်ကိုဆူညံသံလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဖယ်ရှားမည်ဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏အသံပိုမိုစဉ်ဆက်မပြတ်လျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်သို့မဟုတ်ကလစ် နှိပ်. သည် Declick module တစ်ခုရှိသည်သို့မဟုတ် plug-in ကို အကယ်. ပိုပြီးအချိန်ကုန်သက်သာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကအသုံးဝင်သောအစွန်အဖျားကို output သည် Declick ဖြစ်စဉ်ကိုအစမ်းကြည့်နေစဉ်သင့်ရဲ့စပီကာရန် "သာနှိပ်လိုက်ရင်" ။ ဤသည်ကိုသင်မဖယ်ရှားကြသည်အတိအကျဘာကိုနားထောငျပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင် sensitivity ကိုထိန်းချုပ်ညှိအဖြစ်အလွန်အကျွံဖယ်ရှားခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
Distortion သို့မဟုတ် clipping အများအပြားမဟုတ်ရင်တန်ဖိုးရှိသောစေခဲ့ပါတယ်အတိတ်ထဲမှာဖြတ်တောက်ခြင်းအခန်းထဲမှာကြမ်းပြင်မှဒုတိယတန်းသို့တန်းဆင်းခဲ့ရခံရဖို့ကြာပါသည်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးမှာမျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပေါ်လာမယ့်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ကလစ်ထောက်လှမ်းရေးဟာကျန်သေးသည်အသံ၏ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်သည်ဟုအဆင့်မြင့် Interpol နည်းစနစ်နှင့်အတူအနာကိုငြိမ်းစေသောအခါ။ မှော်နဲ့တူပုံပေါ်နိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးကအသံဒီလမ်းအတွက်ပျက်စီးနေသည်ကပြောပါတယ်နောက်တစ်ကြိမ်သည် Declip tool ကိုစမ်းပါ။ ဒါဟာအံ့သြစေခြင်းနှင့်အလွန်အံ့သြစေနိုငျပါသညျ!
အထက်ပါနည်းစနစ်နှင့်ကိရိယာများအပြင်, ကသင့်ရဲ့အသံကယ်တင်မှကြွလာသောအခါနေ့ကိုကယ်တင်နိုင်သည်ကိုပိုပြီး tools များနေဆဲရှိပါတယ်။ အဖြစ်မှန်တီဗီရှိုးမှာတော့သမားတွေပုံမှန်အားဖြင့် action ကိုအောက်ပါန်းကျင်အပြေးနေကြသည်။ ဒါကအဆက်မပြတ်တက်ဆင်းအမျိုးမျိုးအသံအဆင့်ဆင့်ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးတည်းဖြတ်လျှောက်လွှာအတွက် mouse ကိုသူတို့နှင့်အတူကိုထိန်းညှိဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှင်နေစဉ်, ဒါကြောင့်အချိန်နှင့်အချိန်တစ်ခုကြီးမားငွေပမာဏကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ကျနော်တို့အပေါ်အတိုဖြစ်ကြောင်းသဘောတူတရာဖြစ်၏ကြာပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စရာအလိုအလျောက်ဖြတ်သန်းသွားနဲ့ volume ထဲမှာလာပြီးထွက်လွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်း RX4နဲ့တူပလီကေးရှင်းရရှိနိုင်အသိဉာဏ်အဆင့်ကို tools တွေရှိပါတယ်။ သူတို့ကတီထွင်ဖန်တီးမှုအဘို့အချိန်ပိုမိုတက်သည်ကိုလွတ်မြောက်စေဖို့, အပြင်ယနေ့အသံကျယ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီနိုင်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အပိုဆောင်း "မှော်" ကိရိယာများ, အသံကနေအခန်းကို reverberation ကိုဖယ်ရှားလိုအလြောကျနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောမိုက်ခရိုဖုန်းသို့မဟုတ်တည်နေရာကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအသံကကိုက်ညီနှင့်ပင်ထိုကဲ့သို့သောနောက်ခံဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဖြစ်အသုံးဝင်သောဆူညံသံ, နောက်ကျောကိုထည့်သွင်းခြင်း, သဘာဝဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆုံးရှုံးသွားသောအခါဿုံတည်းဖြတ်ထုတ်ချောမွေ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေအောင် ဖြတ်တောက်မှုများအကြားပြောင်းလဲ။
ကျေးဇူးတင်စရာ, အချိန်များပြောင်းလဲပြီ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာကျနော်တို့ရှိသည် tools များရှိသည်။ ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့်အသံအရည်အသွေး၏ပြီးပြည့်စုံသောစွမ်းဆောင်ရည်ဆမ်းဖို့အကြောင်းလာမယ့်အချိန်, နေ့ရက်သည်, ဤအစွမ်းထက် tools တွေကိုကျေးဇူးတင်ကယ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားစေသတည်း
iZotope အခမဲ့ကမ်းလှမ်း အသံပြုပြင်ရေးနှင့်စွမ်းရည်မြှင့် နောက်ဆုံးပေါ် tools တွေသုံးပြီးအသံ restore ပြန်များအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အကြံပေးချက်များနှင့်အတူပဲ့ပြင်။ အဆိုပါလမ်းညွှန်ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် www.izotope.com/en/support/support-resources/guides
iZotope ကုန်ပစ္စည်း Manager ကို
Matt Hines ကအားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
အဆိုပါပရိသတ်မင်္ဂလာ Keeping - ဧပြီလ 11, 2016
အဆိုပါဖြတ်တောက်ခြင်းအခန်းကြမ်းပြင်ကနေသင့်ရဲ့အသံသိမ်းဆည်းနေ - ဧပြီလ 30, 2015
ADR audio အသံအယ်ဒီတာများ audio Post ကိုထုတ်လုပ်မှု အသံပညာရှင်များ iZotope Matt Hines က ရောစပ်ရာ post ကိုထုတ်လုပ်မှု အသံကဒီဇိုင်နာများ တီဗီနည်းပညာ 2015-04-30
ယခင်: In-အားကစားကွင်းနဲ့ Big-Screen ကိုဗီဒီယိုတင်ဆက် Enhance မှ Jacksonville Jaguar အသုံးချ ChyronHego ရဲ့ Virtual 1st
နောက်တစ်ခု: ဒါဟာ Barco နှင့်အတူ သာ. ကောင်း၏င် - ထို E2 တင်ပြစနစ်လိုပဲ